कानूनी सल्लाह सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: कानुनी सल्लाह
तेस्रो बच्चाको लागि मातृत्व पूंजी। तेस्रो बच्चाको जन्ममा भुक्तान
आज, धेरै अभिभावकहरू कसरी, कसलाई र कुन परिस्थितिमा तेस्रो बच्चाका लागि मातृत्व पूंजी प्रदान गरिन्छ भनेर चासो छ। यस लेखमा तपाईले सबै जानकारी फेला पार्नुहुनेछ। "मातृत्व राजधानी" को अवधारणा? आज…
स्वदेश फिर्ता भनेको के हो? स्वदेश फिर्ताका लागि को योग्य छ र यो कसरी गरिन्छ?
राजनीति र व्यवसायको दुनियामा, "स्वदेश" शब्द व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ। कुन अर्थमा र कुन उद्देश्यका लागि यो प्रायः हुन्छ? "प्रत्यावर्तन" शब्दको अर्थ एक सामान्य अर्थमा, "स्वदेश फिर्ता" फिर्ती हो ...
पालन ​​पोल्ने परिवार भनेको के हो? कानूनी क्षेत्रमा एक पालनपोषण परिवार के हो?
धेरै कारणका लागि, आज धेरै बच्चाहरू अविभावकीय हेरचाह र प्रेम बिना छोडिन्छन्। शेल्टरका कर्मचारीहरूले सानालाई सुरक्षित महसुस गराउन सबै गर्दछन्। तर कसैले पनि आमा र बुबालाई बदल्न सक्दैन।
आयरल्याण्डको फ्ल्याग: टापुको उत्तर र दक्षिणको प्रतीक
आयरल्यान्ड एक देश हो जसको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको अधिकारको लागि संघर्ष लामो समयदेखि चलिरहेको छ। गहन छलफल आज सम्म जारी छ। त्यसकारण, आयरल्याण्डको झण्डा र यसका अन्य प्रतीकहरू धेरै हुन सक्छन् ...
श्रम सुरक्षा मा कार्यस्थल मा निर्देशन। स्वास्थ्य र सुरक्षा
व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य कम्पनीका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य र जीवनको रक्षा गर्ने उद्देश्यले आवश्यक उपायहरू र उपायहरूको एक प्रणाली हो। यसमा पुनस्र्थापना, उपचार र रोकथाम, कानूनी, संगठनात्मक र प्राविधिक, सामाजिक-आर्थिक उपायहरू सामेल छन्। एक ...
चीनको झण्डा कस्तो देखिन्छ? चीनको ध्वजको मूल्य
प्रकाशित 15.09.2019 23.09.2019
सब भन्दा पुरानो राज्यहरु मध्ये एक चीन हो। आज सामान्य जस्तो देखिने थुप्रै चीजहरू यस देशबाट आएका छन् - उदाहरणका लागि रेशम, गनपाउडर र कागज। यो चिनियाँ हो जसले, इतिहासकारका अनुसार, झण्डा प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए ...
जबरजस्ती हो ... वर्णन, प्रकार र जबरजस्ती को उपाय
बाध्यता एक प्रकारको झुकाव हो, र जब एक व्यक्तिले केहि चीजहरू गर्न चाहँदैन। त्यस्ता कार्यहरू, जसले मानिसहरूलाई उनीहरूको लागि अवांछनीय वा अस्वीकार्य क्षणहरू गर्न बाध्य गर्दछ, गर्न सक्दछ ...
अवैध व्यवहार हो ... अवैध व्यवहार परिभाषित गर्न को लागी मापदण्ड के हो
अवैध व्यवहार त्यस्तो व्यक्तिको कार्य हो जसको परिणाम स्वरूप अपराध गरिन्छ। यस अवस्थामा, एक निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। अर्थात्: एक व्यक्ति केवल आफ्नो कार्यहरु को बारे मा सचेत मात्र छैन, तर ...
अधिवक्ताको अधिकतम शक्ति
वकील को एक शक्ति को लागी के हो, मलाई लाग्छ, लगभग सबै वयस्क थाहा छ। यो कागजात हो सही पुष्टि गर्दछ, उदाहरण को लागी, यातायात प्रबंधन को, विभिन्न संगठनहरु मा एक प्रतिनिधि हुन, दस्तावेजी काम को लागी अन्य कार्यहरु पूरा गर्न को लागी। अन्य ...
ड्राइविंग स्कूल को लागी चिकित्सा जानकारी
ड्राइभि school स्कूलको लागि कस्तो प्रकारको प्रमाणपत्र आवश्यक छ भन्ने बारेमा, ड्राइभरहरूको लागि भविष्यका उम्मेद्वारहरूले प्रशिक्षण सुरू हुनु अघि नै फेला पार्नेछन्। यो एक चिकित्सा कागजात हो। ड्राइभिंग स्कूलको लागि एक मेडिकल प्रमाणपत्र सुरू गर्न आवश्यक छ ...
के मातृत्व बिदा कार्य अनुभवमा प्रवेश गर्छ? मातृत्व बिदा र रूसमा वरिष्ठता
बच्चाको जन्म प्रत्येक महिलाको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हुन्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग रोजगारसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन्। विशेष रूपमा, सबैभन्दा ज्वलन्त विषयहरू मध्ये एक हो ...
टिप्पणीहरू सहित रूसी संघको लेबर कोडको १136 लेख
श्रमिकहरूलाई कति तलब दिईन्छ भन्ने कुरा श्रम कोडमा केही विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ (विशेष गरी: अनुच्छेद १ 136)। यो प्रश्न बाध्यकारी बारीकहरूको साथ पूर्ण छ। नियोक्ता मात्र आफ्नो कामदारहरुलाई पैसा दिन बाध्य छ ...
रोमानियन नागरिकता कसरी पाउने। रोमानियन नागरिकता प्राप्त गर्दै: कागजात, लागत
निस्सन्देह रोमानियाको नागरिकको राहदानी एक वा अर्को यूरोपीय राज्यमा हुन चाहनेहरूको लागि उत्कृष्ट स्प्रिंगबोर्डको रूपमा सेवा गर्दछ। रोमानिया, यूरोपियन युनियनको सदस्य भई, यसका नागरिकलाई सबैलाई भिसामुक्त प्रवेश प्रदान गर्दछ ...
आगो सुरक्षा सुझाव: आधारभूत नियम
तथ्या show्कले देखाउँदछ, हाम्रो देश मा प्रत्येक पाँच मिनेट मा आगो लाग्छ। एक घण्टा आगोमा एक व्यक्ति मर्दछ, र लगभग बीस गम्भीर घाइते र जलाइन्छ। आगोको मुख्य कारण हो ...
जातीय घृणालाई उजागर गर्दै
आजकल विश्व र व्यक्तिगत देशहरूमा जातीय घृणा जगाउने बारेमा धेरै कुरा भइरहेको छ। राज्य विधायिका निरन्तर आफ्नो आपराधिक कोड संशोधन, जवाफदेहिता वृद्धि ...
आपराधिक प्रक्रिया के हो? प्रकारको आपराधिक कार्यवाही। आपराधिक प्रक्रिया को उद्देश्य
संसारको कुनै पनि राज्य समाजको संगठन को रूप हो। यससँग धेरै प्रकारका कार्यहरू छन् जुन ठूलो सामाजिक महत्त्वको छ। मुख्य मध्ये एक समाज, राज्य र हरेक नागरिकको संरक्षण हो ...
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको रूप कस्तो हुन्छ? अवधारणा र प्रकारहरू, आधुनिक समाजमा उदाहरणहरू
लोकतन्त्र सामाजिक विकासको उच्च रूप हो। साझा सामान र चासोको सन्तुष्टि सम्बन्धी निर्णयहरू आफैंले सामूहिक रूपमा लिन्छन्। समाज एक्लै शक्ति को वैध स्रोत हो। नेताहरू द्वारा निर्वाचित गरिन्छ ...
आपराधिक कानून मा causation का उदाहरण
रूसी संघको कानून बमोजिम, अपराध सम्बन्धको अनुसन्धानमा कार्यकारी सम्बन्ध स्थापना एक अनिवार्य वस्तु हो। यो केहि घटनाहरू वा सर्तहरू बीचको लिंक हो र गलत कार्य वा बेवास्ताको अन्तिम परिणाम हो। यस्तो…
सम्पत्तीमा years बर्ष भन्दा कममा अपार्टमेन्ट बेच्दै। खरीद र अपार्टमेन्टको बिक्री। अपार्टमेन्टको बिक्री
जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, व्यक्तिहरूद्वारा अपार्टमेन्टको बिक्रीबाट हुने आय व्यक्तिगत आयकर - व्यक्तिगत आयकरको अधीनमा हुन्छ। रूसी संघको इलाकामा आवास खरीद गर्दा बिक्री गर्दा, यो सबै अवस्थामा रूसीलाई भुक्तान गरिन्छ ...
FSB मा काम: कसरी व्यवस्थित गर्ने?
एफएसबी, काउन्टरटेन्लिभेन्सीन र इन्टेलीजि functions फंक्शन, साथै अपराध र आतंकवादको विरुद्ध लड्ने संस्थाको रूपमा १teen वर्षदेखि अस्तित्वमा छ। उनको प्रसिद्ध पूर्ववर्तीहरू - चेका, NKVD, KGB, जहाँबाट उनी र ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 150 अर्को पाना
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 3,395 प्रश्नहरू।